Ubungozi bukagwayi buyedlulela kwabesifazane nasezinganeni: ongoti
Phili Mjoli | September 1, 2020
Ongoti bezempilo bathi abesifazane ababhemayo kunamathuba amaningi okuthi babe nenkinga yokuncipha kwemithambo ephakela igazi enhliziyweni okwenza ukuthi igazi lingafinyeleli kahle enhliziyweni nezinkinga zamaphaphu eziholela ekutheni kungaphefumuleki.
Ngaphezu kwalokho owesifazane ohogela ugwayi obhenywa ngumuntu oseduze kwakhe naye uba sengozini efanayo neyomuntu owubhemayo.
Ucwaningo olubheka ukuthi bangakanani abantu ababhemayo kuleli olwenziwe ngo-2016, lukhombisa ukuthi baningi abantu besilisa ababhemayo uma beqhathaniswa nabesifazane abaneminyaka engaphezu kuka-15 abangu-8% kodwa abesifazane ababa nezinkinga ezidalwa ugwayi bangaphezulu kwabesilisa.
UDkt Sharon Nyatsanza, weNational Council Against Smoking (NCAS), uthe ugwayi ukhangiswa njengento eyenziwa ngabantu besifazane abazimele futhi enomthelela ekutheni baphile kahle bangakhuluphali.
“Imboni kagwayi isisungule ogwayi abaheha ngabo abantu besifazane, labo gwayi bazacile. Kuthiwa kabanaso isisindo esifana nesogwayi ojwayelekile okwenza ukuthi umuntu acabange ukuthi ubungozi abukho kuwo kanti okusempeleni wonke ugcwayi une-nicotine, ngakho uyingozi. Wonke ugwayi unesithako i-nicotine noma ngabe usikilidi, owamakhala, obhenywa ngepayipi noma i-e-cigaratte ethandwa ngabantu abasha,” kuchaza uDkt Nyatsanza.
Kubantu besifazane ugwayi ungaholela ekutheni bangenwe wumdlavuza wesibeletho noma webele.
I-website i-smoke free.org ithi kwabesifazane abaqala ukubhema besebancane ubungozi bokubhema kungaze bufinyelele ekutheni kube nzima ukuthi bakhulelwe, baphuphunyelwe yizisu noma bakhulelwe ethunjini okungelona okuholela ekutheni bahlinzwe kunqanyulwe ithumbu, kuyenzeka babelethe ngaphambi kwesikhathi noma izingane zishone ngesikhathi bebeletha. Izingane ezizalwa ngomama abebebhema ngesikhathi bekhulelwe, ithi kujwayele ukuthi zihlaselwe yizinkinga zamaphaphu, isifuba, ukushaya kwenhliziyo ngokushesha, ukungakwazi ukubamba ngokushesha uma sezifunda.